Ngomoya wamadoda ethu ngamanye amaxesha ungathetha iiyure. Yintoni esimele siyenze ngamanye amaxesha ukugcina "ikhophi" eyithandayo ngaphandle kwethu. Kwaye, ukuba umntu ubanjwe obunzima kwaye unomnqweno, kufuneka ulungele oko kuya kufuneka ukuba uzame ngenxa yexesha lakho elifanayo lonwabo. Ekubeni umntu onjalo onokukhawuleza unokukhawuleza ukuba abe neentlungu, sifuna ukwazi amaqhinga ambalwa aza kukunceda uvulekele intanda yakho yonke imihla, ngelixa uqhubeka uyingcamango kuye. Inqaku lethu "Yintoni enokuyenza, ukuze loo nto ingabi nentshisekelo" iya kukuxelela ngale maqhinga ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngokusebenzayo.
Ngokuqinisekileyo, ngamnye wethu ujamelene neemeko ezinjalo, xa umntu echaza ngokucacileyo, bathi, ukhathele konke kwaye ukuba uvakalelwa njani ukuba uthando olunjalo olungabonakaliyo luyabonakala phakathi kwakho. Abanye abafazi baqhaqhayisa baze baphuke: ngokuqinisekileyo, babeyithanda njani indoda ethandekayo? Intukuthelo ithatha inzuzo - kwaye igawula iingcinga, nangona kunjalo emphefumlweni abafuna kakhulu ukuyigcina. Kodwa kukho abafazi bohlobo oluthile - banomdla kumbuzo othi: "Yintoni enokuyenza, ukuze loo nto ingayiphumeleli inzala", kungekhona xa ibuyele kakhulu ukutshintsha into ethile, kodwa kusengaphambili, xa ubudlelwane buqala ukufumana ukukhawuleza. Kodwa oku akuthethi ukuba xa zonke izinto zinikezela, awukwazi ukugcina ibini lakho.
Masithi umfana wakho ukhuphe ngokucacileyo kuwe kwaye walahlekelwa umdla. Kubuhlungu kakhulu, ndiyavuma, kodwa kufuneka uhlale phantsi uze uqikelele-kutheni le nto yenzeke kwaye kungubani na isizathu esilandelayo? Siyanixwayisa kwangaphambili ukuba ukuphela kwayo yonke imizamo yakho ayinakuphumelela - ngokuba indoda yakho nayo ingumntu, ngeemvakalelo zakhe nangemvakalelo kwaye, mhlawumbi, wagqiba kwelokuba ayinqumelanise yonke into kwaye akayi kuvuma ukuxolelana. Yilungiselele ukuguquka kweziganeko.
Ngoku jonga ngokwakho: ngaba le ndoda indoda oyifunayo? Okanye mhlawumbi awuyikubona okukhethwa kulo mzuzu kwaye kukuthi - njengethuba lokugqibela lomntu omanzi? Cinga ngenyameko ngaphambi kokuya ekulweni kwikamva lakho kunye.
Zama kwakhona ukuqonda ukuba ingxaki yakho ingaphi na umntu - oku kuyimfuneko ukwenzela ukuba ubone indlela yokuqhubeka ngayo kule meko. Qala encinci - hlaziya ngokwakho, utshintshe umfanekiso: vumela iinwele zakho kunye neengubo zakho ziguqulwe ngokuphawulekayo, kwaye umfana uya kuzibona! Amadoda athanda yonke into entsha, njengoko enyanyiswa ngokwenene "endala". Ukuba ubona ukuba le nto ayincedi, ke ingxaki idibanisa kakhulu kunokuba ungacinga.
Ngendlela, ngokuqhelekileyo, kunokuhlala phantsi kwaye uxoxe ngokuzenzekelayo ngolu hlobo lwengxabano kunye ne "iqela lokubhikisha", sigcina yonke into engalunganga kwaye sakha ingqiqo malunga nento engalunganga kuthi. Kukho imigca emibini yokuziphatha kwethu nawe. Okanye siba ngongqongqo kwaye sivumelane nayo yonke into, sizama ukukholisa "inkosi" ukuze atshintshe umsindo wakhe inceba. Okanye, ngokuchasene noko, sithatha umyalelo wokukhusela kwaye sitshabalalisa ukunganeliseki nje kuphela ngeendlebe, kodwa kunye nezenzo. Qaphela ukuba ingqolowa eyakhayo ayifumanekanga kwiyokuqala okanye kweyesibini. Kodwa ukulungiselela intetho ethe tye kwiitoni ezilungileyo, mhlawumbi, indlela engcono yokuphuma. Ngexesha elifanayo, kwaye nixoxe - obani kunye nantoni na engxaki, nokuba ufuna ukutshintsha kwaye yintoni na.
Xa kungekho mntu unawe, hlalani yedwa ngokuzikhethela, ubenze itiye ngakumbi kwaye ucinge ngokuziphatha kwakho. Oku akuhlekisayo - ngokwenene, uhlambele umlingiswa wakho, imbeko yakho "kwiishelulo," zama ukuqonda - mhlawumbi usitya kakhulu ekhaya, yintoni eyanxilisayo nawe? Mhlawumbi wena kunye nalo mfana nje unomdla ohlukeneyo? Mhlawumbi ufuna ukuba uhlanganyele ngokuthanda kwakhe okanye, ubuncinane, ungamthinteli ukwenza oko akuthandayo? Thatha iqabunga uze ubhale kuyo malunga nazo zonke iziphoso zakho. Ayikwazi ukuba unayo? Emva koko ubuza umfana - yiziphi izinto eziphazamisayo azibona kuwe? Uze ukhangele uluhlu. Okokuqala, ngenxa yolu, uya kuqonda ukuba yintoni ekhoyo ekhoyo, kwaye, okwesibini, uya kukwazi ukuqonda ngokwakho kunye nezizathu zokungquzulana kwakho.
Nangona kunjalo, emva kokuzikhethela ngokwalo kunokulandela ngokulungileyo kwaye kunengqiqo, kodwa kungathandeki. Ngokomzekelo, ugxininise kwiingxaki zakho kunye nokungaphumeleli kwaye ulahlekelwe ukholo kuwe. Unjalo, ulungile kwaye unomusa, kwaye andifanelekanga, andifanele yena ... Mantombazana, mzalwana, awunakuze ulahlekelwe ukholo kuwe kwaye ufumane unyawo! Ndikholelwe, amadoda akho akayi kukuthanda. Kakade ke, umfazi kufuneka abe buthathaka kwaye angakhuseli, kodwa akhathalelekanga kuye. Ngoko khumbula ukuzikhukhumeza kwakho kwaye ungakuvumeli ukunyathela ukuthungca.
Oko, ngokusemthethweni, kunye neengcebiso zethu zonke. Ba landele kwaye baqonde imeko - eli liyinyathelo yokuqala kwisisombululo esiphumeleleyo. Ukuba uyaqonda ukuba le nto isele kuwe - zama ukutshintsha nokuzama, avela phambi kwamehlo akho ozithandayo rhoqo ixesha elitsha nelifihlakeleyo - makhe umntu wakho angaze aphephe ukuqaphela i-puzzle yakho! Funda ukudansa okanye ukupheka, ukugubungela ukuzingca kwakhe - emva koko, kufuneka babe nekratshi ngamantombazana abo - kwaye kuphela ke balala phantsi kobudlelwane bakho.
Kodwa ukuba ubonile ukuba ukuzama apha akukho nto kwaye umntu onqabileyo ufuna isizathu sokushiya-ke ungayibambeli. Uzimisele ukwenza yonke into kwaye uyicinga ngokunyamezela kwakhe uya kwenza okubi ngakumbi - mhlawumbi uya kuba nomsindo kuwe kunye nokungaqondani kwakho kunye nokushiya, uthathe umphefumlo wakho nentukuthelo kunye nomsindo - oya kuvuma, uyisiphelo esingathandekiyo kuyo nayiphi na ubudlelwane - nabo licolile.
Kodwa, nokuba yintoni na, into ephambili - ungadikibala! Nangona umntu ehamba, akuthethi ukuba ubomi buphelile. Ngokuphambene noko, ubomi buqhubeka nje, kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi emva komnye ukuguqulwa kwexesha elizayo uza kudibana nothando lwakho lokwenene ... kwaye kufuneka ulungele ukuba ungakuphelelwa yintswelo yangempela ngokwakho! Ukufumana amandla okuvumela ukuhamba kwiimeko ezidlulileyo, eziphelile kumgama onzima kuwe. Ukuze kungabikho ukungathembeki kunye nokudakumba, kodwa ukukhohlisa amadoda ngesiganeko esingaqondakaliyo samehlo athile ... Akusiyo nto into yokuba ulonwabo lwabesifazane luphelelwe ngokupheleleyo kwaye lu sekelwe ngokupheleleyo kwindoda ethandekayo enecala layo! Ngoko masibe nolonwabo, nothando nabathandekayo bafazi!
Kutheni amadoda atshatileyo kwaye uyisidenge
Nantoni na intombazana kufuneka ikwazi ngabantu
I-Ricotta ene-lemon kunye ne-basil
I-intanethi ihleka inxalenye ye "bloopers" ezintsha ukusuka kuAnastasia Volochkova, ukukhethwa kwezithombe
I-Evelina Bledans ibonakalisa imfihlelo yokuvisisana kwayo
Ukuzivocavoca umzimba kumxhesho wangaphakathi wethanga